WAXAAN U KORAYNAA LUNGWORT BEERTA: TALOOYIN WAX KU OOL AH EE BILOWGA AH - MAQAALLO
Diyaargarowga beesha ku dhagan dacha badanaa waxay bixisaa beeritaanka noocyo kala duwan oo dhirta ornamental ah. Nasiib darro, badankoodu waa qorrax-jecel oo kaliya ku qarsoon ee hooska. Laakiin maxaa dhacaya haddii badi goobtu ku taallahay xagga hoose ee hooska? Jawaabtu waa mid sahlan - ku samee sambabada. Ubaxeeda waxay noqon doontaa quruxda aad u qurxoon ee beerta oo dhan, iyo fududaynta marka la eego daryeelka ayaa kuu ogolaaneysa inaadan waqti badan ku qaadin dhirtaas. Dhammaan waxyaalaha lagaa rabo (marxaladda bilowga ah) waa inaad doorato oo aad beerato noocyada aad jeceshahay, waxaanan kuu sheegi doonaa sida tan hadda loo sameeyo.
Noocyada qurxinta ee sanbabada
Medunitsa waa geedo digaag ah oo inta badan ku kora dabeecadda furan inta u dhaxaysa geedaha iyo xoortay. Ku dhawaad ​​dhammaan noocyada kala duwan ayaa mideysan oo midaysan: ubax ee medunitsa isbedel midabka of corolla inta lagu jiro ubax. Laga bilaabo in la barbaariyo casaan, waxay si tartiib tartiib ah u beddelayaa buluug.
Ma taqaanaa?Magaca sayniska ee dhirta waa "Pulmonaria", taas oo la xidhiidha isticmaalka daaweynta cudurrada sambabada (laga bilaabo Laatinka "pulmon" macnaheedu waa "iftiin"). Noocyo badan oo naga mid ah "lungwort" waxay u barteen dadka sababtoo ah nectar ku jira ubaxyada, gaar ahaan tan waa mid ka mid ah dhirta malab ee ugu horreysa.
Maanta waxaa jira ilaa 15 nooc oo dhirtaas ah, laakiin dhammaantood ma laha guryaha qurxinta. Sidaa daraadeed, waxaan go'aansannay in aan doorano kaliya kuwa badanaa laga helo sariiraha ubaxa.
Medunitsa casaan. Nooca ugu horreeya ee dhirta, kaas oo ku farxi kara midab casaan leh muddo dheer. Marka koray beeraha, waxay u koraan si aad u xoogan, sameynta daboolka cufan ee caleemaha yaryar cagaaran oo aan lahayn dhibco.
Lunitolus medunitse. In kasta oo xaqiiqda ah in tani waa aragti aad u qurux badan, ee beeraha waa wax dhif ah. Waxaa loo kala saaraa heerkulku, laakiin dabeecadda ugu wayni waa caleemo waaweyn oo isbeddelaya midabkooda (guga hore waxay cagaaran yihiin dhibco dhaadheer, waxayna kudhowyihiin dhexda dhexe ee xagaaga isku xidhka iyo xaashidu waxay noqotaa gebi ahaan lacag). Ubaxu wuxuu bilaabmaa horraanta gu'ga, qurxinta dayrka ama beerta leh ubaxyo casaan-guduud ah.
Medunitsa officinalis. A hoos u (ilaa 30 cm) warshad taas oo lagu kala gooyay heer sare ee caabiga jiilaalka (awood u leh heerkulka hoos ilaa -35 ° C). Muddada ubaxu waxay socotaa ilaa hal bil waxayna bilaabmeysaa badhtamaha May. Bilowga barafka, corolla wuxuu leeyahay midab casaan ah, waqti ka dibna wuxuu noqonayaa midab.
Medunitsa waqti dheer. In dhererka, dhirta this gaaro 25 cm, iyo kala duwan yihiin noocyada kale ee caleemaha aad u quruxsan: qaybta sare waa cagaar madow ee midabka, leh dhibco leh silvery kala firdhiyey, iyo mid hoose waa cawl-cagaar. Dhirta noocan oo kale ah way u adkahay in ay toos u iftiimiso iftiinka qorraxda, taas oo aan run ahayn noocyada kale ee nambarada. Ubaxku wuxuu bilaabmaa Abriil. Marka hore, inflorescences ubaxu waxay leeyihiin midab casaan ah, laakiin waqti ka dib waxay helayaan midab buluug ah.
Medunitsa oo ah kuwa ugu khafiifsan. Xayawaankani waxay ka sameeyaan duurka cufan, oo dhererkoodu gaaro 50 cm. Ubaxyo buluug-buluug ah ayaa muuqda dhammaadka bisha Abriil, iyo dhirta ubaxu waxay socotaa ilaa bartamihii xagaaga. Bishii Agoosto ama Sebtembar, mar kale ayuu ku duugi karaa, caleemuhuna waxay muuqdaan inta lagu jiro xilliga xagaaga.
Maqaarka sonkorta (maqaarka). Tilmaamaha noocyada daboolka ah ee dhulka, iyo caleemaha dhuxushu waxay abuuraan rooga gaaban. Iyada oo ay soo ifbaxday guga, geedka wuxuu bilaabmaa inuu la jajabiyo noocyada kala duwan ee inflorescences, taas oo, sida in noocyada hore, ay awoodaan inay beddelaan midabkooda (kiiskan laga bilaabo carmine ilaa dhar guduudan).
Maqnaansho dhexdhexaad ah (ama, sida loogu yeero, - "mugdi"). Nooc kale oo warshad ah oo beddeli kara midabka inflorescences inta lagu jiro ubax (laga bilaabo casaan ilaa buluug ama guduud mugdi ah). Marka la barbardhigo noocyada kale, sambabada aan caddayn in badan ayaa dalbanaysa qaabka ciidda.
Qalabka saxda ah ayaa muhiim u ah kobaca wanaagsan.
Daryeelka sambabku waa, dabcan, arrin muhiim ah, laakiin marka hore waxaad u baahan tahay inaad si fiican u beerto. Fikradda "saxda ah" degitaanku waxay tilmaamaysaa xulashada wakhtiga ugu fiicnaanta iyo meesha loogu talagalay helitaanka sanduuqa qashinka, iyo sidoo kale diyaargarowga habka ciidda ku habboon.
Waqtiga ugu yar ee soo degitaanka
Waqtiga ugu habboon ee beeritaanka jellyfish beerta, sida, dhab ahaan, dhirta kale oo badan, waa bilowga guga. Waxay ahayd xilligaas oo ah in dhulku uu ka buuxo nafaqooyin iyo raad raac waxtar leh dhirta, iyo maqnaanshaha dhaxan waxay u oggolaaneysaa warshad dhalinyaro ah inay la qabsato deegaanka cusub.
Waa muhiim!Medunitsa ma jecla daawada qoyaanka ah ee dhulka, sidaa daraadeed waa mid aad u muhiim ah in goobta ay leedahay waqti ay qalajiso ka dib jiilaalka oo si fiican u miiray. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la nadiifiyo goobta cagaaran ee cagaarka.
Sida loo doorto goob degel
Faa'iidada muhiimka ah ee pulmonaria dhirta kale waa unpretentious marka la eego iftiinka. Waxay si sahlan u kori kartaa hadhka ama hooska qayb ahaan, iyo qorraxda tooska ah ayaa guud ahaan burburisa iyada. Haddii aysan jirin meel ka mid ah beertaada si aad sambabada u sii kordhiso, ka dibna isku day inaad gashato dhirta halkaasoo laga ilaalin doono qorraxda ugu yaraan hal maalin maalintii (tusaale ahaan, hoosteeda taajaha faraca ee geedaha).
In kasta oo xaqiiqda ah in medunitsa loo tixgeliyo dhaqanka qoyan ee qoyan, waxay si liidataa meelo aad u qoyan. Xaaladdan, waxaa lagama maarmaan ah in la qalabeeyo sariir sarreysa.
Waa muhiim! Markaad ku beerto daawo medunitsa, casaan ama qiimo leh, waxaad u baahan tahay inaad u habeyso meel bannaan oo loogu talagalay, maaddaama gaar ahaan noocyada noocan ah ay u nugul yihiin "faafinta" goobta.
Sida loo diyaariyo ciidda ka hor beerashada
Pulmonaria ma laha shuruudaha sare ee ka kooban ciidda iyo koraan karaa ku dhowaad ciidda, inkasta oo markii uu ku koray kalamoyinka-alkaline iyo carrada yar acidic, waxay u muuqan doontaa si gaar ah wanaagsan. Sidaa darteed, haddii ay jiraan carrada saboolka ah ee xagaaga xagaaga, ka dibna ka hor beerashada sanduuqa sambabka waxa fiican in la dalbado Bacriminta organic. Marka laga beerto noocyada dhoobada-leaved, Bacriminta aan loo baahan yahay, sida dhirta dareemaan weyn on ciidda saboolka saboolka ah.
Si kastaba ha ahaatee, tani macnaheedu maahan in, ka dib markii laga beerto geedka mar uun, uma baahnid in muddo gaaban la quudiyo. Xitaa ka badan alkaline wanaagsan, wax yar acid, bacaadka ama loamy, carrada dabacsan waa inay ku jiraan humus. Sidaa darteed Humus waxaa si joogto ah loo keenaa hoostiisa waxaana la quudin jiray ugu yaraan hal mar xilli (Bilaha ugu haboon waa July, marka caleemaha cusub ay si weyn u koraan geedka). Sida xal u habboon bacriminta macdanta diyaarsan ee heerarka 15-20 g halkii 10 litir oo biyo ah.
Ma aha qarsoodi in medunitsa kora ugu fiican xaaladaha qoyaan ku filan, laakiin heerka qoyaankani waa inuusan noqon mid aad u sarreeya Sidaa daraadeed, hubi nidaam wanaagsan oo dheeli tiran ciidda ka hor intaan la beeri.
Masaafada u dhexeysa duurka u dhow waa in aan ka yarayn 15 cm, inkastoo noocyada ay u nugul yihiin koritaanka, waxaa fiican in la beero 20, 25 ama xitaa 30 cm kala gooni ah.
Astaamaha Lungwort Care
Warshad kasta waxay leedahay shuruudaha u gaarka ah ee daryeelka, iyo pulmonaria ma aha mid ka reeban arrintan. Sidaa darteed, doonaya in ay koraan warshad, waa lagama maarmaan in la fahmo sida biyaha, trim, bacriminta iyo mulch si sax ah.
Inta badan, Medunitsa officinalis, sida badanaa loo yaqaan, uma baahna waraabin badan, sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo qadar badan oo dareere ah si ciid ah oo keliya xilliga abaarta. Inta badan dhammaantood, muuqaalka gaduudku wuxuu ka jiraa la'aanta qoyaan: caleemaha waaweyn waxay luminayaan bacriminta waxayna si dhaqso ah u dhajinayaan, si ay u badbaadiyaan geedka, waa in la gooyaa.
Iyadoo imaanshada guga, ciidda agagaarka baadiyaha hoose ee Lungwort waxaa lagu daboolay mulch dabiiciga ah: chips wood, peat, cawska ama berrinka. Qalab noocan oo kale ah oo leh dhumucdiis 8-15 cm ayaa badbaadin doonta lakabka ugu sareeya ee ciidda ka soo kulul, oo qalajinaya, iyo sidoo kale xannibo jidka caws iyo xitaa u adeegaan sidii quudin dheeraad ah loogu talagalay melluna.
Xakamaynta sambabada ayaa hoos loo dhigayaa ka saarista cagaarka (sidaa daraadeed xitaa khaanadaha ma joogayaan) kadib dhammaadka xilliga ubaxka. Sidoo kale, caleemo jir ah, kuwaas oo muddo dheer ka joogsaday in ay qurxiyaan baadiyaha, sidoo kale sidoo kale si go'an loo gooyaa.
Waa muhiim! Ma jeexi kartid ubaxa iyo caleemaha, waxay kaliya oo la gooyaa mindi fiiqan, si aanay u waxyeeleynin qaybo muhiim ah oo geedka.
Baabi'iyo caabbinta dhaxan
Waa in la xuso oo Heerka sare ee iska caabinta ee hargabka qaboobaha Meelaha cimilada dhexe, ma xitaa had iyo jeer la daboolo jiilaalka, inkasta oo sannadka ugu horreeya ee ka dib laga beero, weli way ka fiican tahay daboolida suufka leh peat, geedo loosaaray geed ama caleemo qadiimi ah, taas oo abuuraysa xaalado badan oo raaxo leh oo aan weli ku jirin warshad aad u xoogan.
Lungwort ee naqshad beerta
Medunitsa - waxay ku habboon tahay naqshadeynta beerta. Bannaanka u badan ayaa u qalmay in ay tixgeliyaan ubaxa ugu quruxda badan ee dadka ku nool xeryaha, oo inta badan laga heli karo beerta dalka. Marka medunitsa blooms ah, rooga qaro weyn waxaa loo abuuray on sawirka, ka abuuray midabyo badan oo dhalaalaya iyo dhalaalaya.
Jirooyinka khafiifka ah ee geedkani waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh. Intaa waxaa dheer, Lungwort si fiican u socda oo leh duurka kala duwan. Tusaale ahaan, isku day inaad sameysid sambabada soodhada balaayada ama deden.
Ubax Tani waa lagama maarmaan in sariiro beerta guga ee isku dhafan oo leh geedo, daffodils iyo miisaanka, iyo beeraha ubax qaba ubax dambe, waxaa si fiican u buuxin doonaa by qubayska, phloxes iyo astilbe.
Siyaabaha qoryaha taranka
Medunitsa waxay si fudud ugu soo saari kartaa habka dhirta, laakiin badanaa lagama maarmaan maaha inay kala qaybiso duurka. Tani waa warshad joogto ah, iyo xaaladaha dabiiciga ah geedi-socodka dhalmada waxay ka dhacdaa bilowga bilicda waxayna sii socotaa inta badan muddada koritaanka. Qeybaha hore ee rhizome u dhintaan waqti, iyo baadiyaha waxay bilaabaan inay gooyaan.
Marka laga hadlayo "xaaladaha guriga" lungfish waxay ku dhufaan saddex siyaabood oo waaweyn: kala qaybinta baadiyaha, qaybaha lafdhabarta iyo abuurka.
Xaaladaha badankood iyaga oo u qaybinaya baadiyaha, waxay ku dhufanayaan sonkorta iyo lafaha yaryar oo dheer. Si arrintan loo sameeyo dhamaadka xilli-dugsiyeedka waxaa lagama maarmaan ah in la kala saaro qaybo badan oo leh burooyinkooda mid kasta. Taas ka dib, "qaybaha" waxaa lagu beeray ciidda diyaarisay si qoto dheer 4 cm.
Marka loo qeybiyo rhizomes, waxaad ku haysan kartaa dhammaan tayada kala duwan ee kala duwan. Guga hore, baadiyaha waxaa la qoday, ka dib markii taas oo loo qaybiyey qaybo iyo gooyay. Qaybaha la helay waa in lagu dhex beeray meel fog oo aan ka yarayn 30 cm midba midka kale, oo ha iloobin in ay tahay in lagu beeray qoto dheer sida dhirta ka hor qeybinta. Haddii bilowga guga ma aadan haysan waqti aad ku kala qaybiso ubaxa, waxaa la samayn karaa bilowga xilliga dayrta sida ugu dhakhsaha badan oo ay joojiso ubaxu. Iyadoo loo qaybinayo rizoodhka inta badan la faafiyo daawooyinka, casaanka, mashiinka-la midka ah iyo noocyo cidhiidhi ah oo dhirta geedka.
Isticmaalka habka abuurka dhalmada, waxay kugu adkaan doontaa inaad ilaaliso kala duwanaanta saafiga ah. Pollination waxaa loo sameeyaa si wadajir ah, sidaas darteed haddii aad diyaar u tahay tijaabooyinka, waxaad ku beeran kartaa sanduuqa qashinka ee agagaarkaaga, taas oo ka dhalatay waxaad heli kartaa palette ku filan oo ah midabyo badan oo kala duwan, iyo, waxay u egtahay, waxaad noqon doontaa nuqul gaar ah.
Ma taqaanaa? Medunica waa mid ka mid ah myrmecohors, dhirta miraha ay ku faafaan qowlka. Waxay badanaa keenaan muuqaalkeeda muuqaalka ugu muhiimsan ee beerta.
Cadaadiska cayayaanka beerta
Qodob kale oo wanaagsan oo ku saabsan abuurista sadaqada ayaa ah waxaa loola jeedaa inaysan u dhigin cudurada iyo fowdada cayayaanka, iyo khatarta kaliya ee kuugu hanjabta dhirtaada waa slugs iyo snails, adoo cunaya caleemaha sambabada. Waxay jecel yihiin ciid aad u qoyan, sidaas darteed, sida ugu dhakhsaha badan waraabinta dhirta ay aad u badato, martida aan la socon ayaa soo muuqan doona ubaxyada.
Marka laga hadlayo dagaalka iyaga ka mid ah waxay caawin doonaan hababka agrotechnical, iyagoo bixiya falanqeyn faahfaahsan iyo nadiifinta ciidda cawska, iyo sidoo kale manjooyin wakhti go'an si looga hortago dhumucda dhirta.